Xog: Mareykanka oo shaki ka qaba in XASAN SH. uu doorasho xalaal ah dalka ka qaban doono !!!! - Caasimada Online
Home Warar Xog: Mareykanka oo shaki ka qaba in XASAN SH. uu doorasho xalaal...
Xog: Mareykanka oo shaki ka qaba in XASAN SH. uu doorasho xalaal ah dalka ka qaban doono !!!!
Muqdisho (Caasimada Online) – Iyadoo uu Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee dalka Maraykanka, John Kerry shalay booqasho mar-la-arag ah ku yimid magaalladda Muqdisho, ayaa waxaa soo baxayo inay Dowladda Maraykanka shaki ka qabto qabsoomida Doorashadda la filayo in sannadka soo socda ka dhacaan Somalia.
“Kuma socoto inay Doorashadaasi noqoto mid ku salaysan Hal qof iyo hal cod (One man and one Vote)”
Hadalka Dowladda Maraykanka ayaa muujinaya inay doonayaan Isbedel lagu sameeyo qaabka wax loo dooran jirey, si meesha looga saaro hab-dhaqanka gurracan ee ay u dhaceen Doorashooyinkii ore.